Boqorka Yoruba oo lagu aasay Nigeria - BBC Somali
Boqorka Yoruba oo lagu aasay Nigeria
Boqor aad looga qadariyo koonfur galbeed Nigeria ayaa lagu aasay magaalada Ife.
Kumanyaal ayaa tagay qasriga boqortooyda ee magaalada Ife, halkasi oo ah meesha ay ka soo jeedaan qowmiyadda Yoruba. Aaska rasmiga ah ee, Okunade Sijuwade Olubuse, labaad ayaa ahaa mid dhaqan ah oo ay joogeen oo kaliya tiro yar oo ka tirsan qoyskiisa iyo saraakiisha boqortooyada.
Sida dhaqanku yahay qofna ma dhahayo boqorku waa dhintay, balse waxay leeyihiin inuu la midoobay awoowayaashiisa, waxayna aaminsan yihiin inuu dib u dhallan doono.
Boqorka oo 85 jiray ayaa ku geeriyooday magaalada London July, balse dhimashadiisa ayaa arbacadii la shaaciyay.
Dadka ka faalooda arrimaha ayaa sheegaya in tani aysan layaab aheyn, iyadoo marka hore loo baahan yahay in wadahadal badan kaddibna la bilaabo cidda badali laheyd ka hor intaan lagu dhawaaqin geerida.
Badi dadka Yoruba oo gaaraya ilaa 35 milyan kuna kala nool, koonfur galbeed Nigeira, Togo iyo Benin ayaa aad u ixtiraama.